विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेपछि एक्स–रे मेसिन अलपत्र - Hamrokhotang
Home » News » Photo Gallary » विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेपछि एक्स–रे मेसिन अलपत्र
विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेपछि एक्स–रे मेसिन अलपत्र
फाल्गुन–४, जिल्ला अस्पताल खोटाङमा जडान गरिएको एक्स–रे मेसिन लामो समयदेखि अलपत्र बनेको छ । एक्स–रे मेसिनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत ट्रान्सफरमर जडानमा सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण अलपत्र बनेको हो ।
पुरानो एक्स–रे मेसिन बिग्रिएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले उपलब्ध गराएको जि.एक्स.आर. डिजिटल एक्स–रे मेसिन विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेकै कारण हालसम्म सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जिल्ला अस्पताल खोटाङका प्रमुख डाक्टर माधव लम्सालले बताउनुभयो । उक्त मेसिन सञ्चालन गर्न ५० केभीएको ट्रान्सफरमर आवश्यक पर्छ, डाक्टर लम्सालले भन्नुभयो, “हाल २५ केभीएको ट्रान्सफरमर भएकाले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राहीमा परेको छ ।”
जिल्ला अस्पताल खोटाङमा अलपत्र अवस्थामा रहेको एक्स–रे मेसिन । विद्युत भोल्ट्रेज नपुगेपछि मेसिन सञ्चालन गर्न नसकिएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर माधव लम्सालको भनाइ छ ।
अस्पताल स्रोतका अनुसार यसअघि सञ्चालनमा रहेको १०० एम.ए. क्षमताको एक्स–रे मेसिन विद्युत आपूर्तीकै कारण बिग्रिएको जनाइएको छ । डाक्टर लम्साल भन्नुहुन्छ, “अस्पतालमा हाल दैनिक ४०÷५० जना बिरामी एक्स–रे गर्न आउँछन्, विद्युत अभावमा मेसिन सञ्चालन चलाउन नसकेपछि अन्यत्र रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।”
अस्पताल स्रोतका अनुसार बिगत दुई वर्षदेखि अस्पतालमा यस्तो समस्या झेल्नु परेको जनाइएको छ । जिल्लाको एक मात्र अस्पतालमा एक्स–रे नभएपछि कतिपयले चर्को शुल्क तिरेर निजी क्लिनिकहरुमा एक्स–रे गर्ने गरेका छन् । बिरामीका अफन्तहरु भन्छन्,–“एक्स–रे गर्नकै लागि हेलिकोप्टर समेत चार्टर गर्नुपर्ने बाध्यता छ, यसमा कसैको ध्यान जान सकेन !”
अस्पतालमा जडान गरिएको डिजिटल एक्स–रे मेसिन सञ्चालनमा आए जिल्लाबासीको लागी सहज हुने अस्पतालले जनाएको छ । उक्त एक्स–रे मेसिन पूर्वी पहाडी जिल्लामध्ये खोटाङमा मात्र भएको डाक्टर लम्सालको भनाइ छ ।
उता, कार्यालयबाट अस्पताललाई आवश्यक पर्ने क्षमताको ट्रान्सफरमर दिन नसकिने विद्युत प्राधिकरण शाखा कार्यालय खोटाङका प्रमुख पुरुषोतम रेग्मीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालबाट माग भएको खण्डमा माथिल्लो निकायमा पठाउनसम्म सक्छौं, तर कार्यालयबाट सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन ।”
२०४४ सालमा स्थापना भएको अस्पतालमा हाल १५ शैया मात्र छ । उक्त अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति तथा भौतिक सुविधा नहुँदा जिल्लाका अधिकांश बिरामी उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने अवस्था छ ।